संसारमै धेरै कमाउने ‘यूट्युब स्टार’ सूचीमा ६ वर्षीय रेयान
१ पुष २०७४
कल्पना गर्नुहोस्, ६ वर्षको बच्चाले व्यवसायिक काम गर्न सक्छ? कमाउन सक्छ? कमाइ हाले पनि कति रूपैयाँ कमाउला? यी सबको जवाफ दिएका छन् रेयान नामका बालकले जो मात्रै ६ वर्षका छन्। उनी यूट्युबका ‘स्टार’ हुन् जो हरेक हप्ता यूट्युबमा खेलौनाको समीक्षा गर्छन्। उनको च्यानल हिट छ र यसबापत् उनका अभिभावकले मोटो रकम थाप्दै आएका फोर्ब्स पत्रिकाले जनाएको छ। रेयानले गत वर्ष १ करोड १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरेका थिए।
रेयानको ‘रेयान ट्योज रिभ्यु’ च्यानलका भिडियो करोडौंपटक हेरिएका छन्। यो च्यानलमार्फत् उनले आफ्ना दर्शकलाई खेलौनाको ‘छुट्टै संसार’ लैजाने टिप्पणी विश्लेषकले गरेका छन्। सन् २०१५ बाट सुरु भएको उनको च्यानलका भिडियो हालसम्म १६ अर्बभन्दा बढी पटक हेरिएका छन्।फोर्ब्सले उनलाई सन् २०१७ मा संसारमै धेरै आम्दानी गर्ने यूट्युब स्टारको सूचीमा राखेको छ।
रेयानकी आमाले पनि आफ्नो परिचय दिन मानिनन्। ‘उसले मलाई सानैदेखि गनगन गर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘म अरू बच्चा जस्तो यूट्युबमा किन देखिन्नँ भन्थ्यो। त्यसपछि हामीले उसलाई यो सम्भव छ बाबु भनेर सम्झायौं र खेलौना किन्न गयौं। पहिलोपटक हामीले उसलाई एक रेल किनिदियौं र यहीँबाट यो सब ...........